Umncintiswano wesibili weMyaku | Izincwadi Zamanje
Umncintiswano wesibili weMyaku
Kulo nyaka i Inhlangano kaMyaku uhlela omunye umncintiswano we amahlaya njengaku-2008, futhi yize umnqamulajuqu wokuletha imisebenzi uphele kusasa, welulelwe enye inyanga, nonke enifuna ukujabula ngayo kuze kube nguMeyi 1 ukukwazi ukukwenza. Nayi imithetho yomncintiswano:
Ngemuva kokuphumelela komncintiswano wokuqala wamahlaya we-MYAKU, manje sethula umncintiswano wesibili wamahlaya we-MYAKU Cultural Association.
Inhloso yalo mncintiswano ukugqugquzela ukwakhiwa kwemisebenzi ngababhali abasha kanye nokushicilelwa nokusatshalaliswa kwabo emicimbini ephawuleka kakhulu endaweni yesizwe ezweni lamahlaya. Asisakwazi ukunikeza inkontileka yomsebenzi kepha he, kwazi bani ukuthi singahamba ibanga elingakanani ngesikhathi esifushane!
Khuthaza wonke umuntu ukuthi abambe iqhaza futhi / noma asakaze igama ngomncintiswano. Ekugcineni kunezixhumanisi ezimbalwa zokulanda izisekelo nethempulethi engasetshenziswa ukuthumela idatha edingekayo yokungenela umncintiswano.
Lapha sethula izisekelo:
1-Yonke imisebenzi efakiwe kumele ibe ngeyangempela.
2-Usuku lokudala luzokhonjiswa nokuthi imisebenzi ayikashicilelwa noma cha, noma uma ishicilelwe kunoma iyiphi into ephrintiwe noma yedijithali ngaphambi kosuku lokwethulwa. Kumele futhi kuboniswe uma izinhlamvu ezisetshenzisiwe ziyingxenye noma ziyingxenye yomunye umsebenzi noma uchungechunge, okwedlule noma okwedlule.
I-3-Imisebenzi eveziwe ingaba ngeyomuntu ngamunye noma ngokuhlanganyela. Uma zihlangene, kufanele kukhonjiswe amagama abo bonke ababhali.
4-Itimu, uhlobo nesitayela kuzoba mahhala.
5-Usayizi wekhasi ngalinye uzoba ngamasentimitha angama-21 ukuphakama ngamasentimitha ayi-14,85 ububanzi (ifomethi ye-A5) nasesinqumweni se-300 dpi. Usayizi ungahluka inqobo nje uma ungancishiswa noma ukhuliselwe esilinganisweni esifanele ngekhwalithi enhle futhi ikhomikhi ayilahli okuqukethwe. Uma unombhalo, umbhalo kufanele ufundeke kahle ngosayizi okhonjisiwe. Ubude obuncane buzoba ngamakhasi ama-4 bese kuthi ubukhulu bube ngu-8.
6-Ukusetshenziswa kombala kuzokwaziswa kahle. Uma umbala usetshenzisiwe, kufanele ube ngefomethi ye-CMYK. Uma kwenziwe ngekhompyutha, umsebenzi kufanele wethulwe ngongqimba owodwa.
7-Ukwethulwa komsebenzi kuzokwenziwa nge-imeyili kukheli elithi myaku.fanzine@gmail.com nangaphansi kwesihloko esithi “2nd COMIC MYAKU CONTEST”. Kanye nomsebenzi, kudokhumenti ebizwa ngeDatha nge-txt noma ifomethi yamagama. Imininingwane elandelayo izofakwa: igama nesibongo, ikheli eliphelele leposi, i-imeyili, ucingo, unyaka wokuzalwa, igama lomsebenzi owethulwe nesipiliyoni (ithempulethi iyatholakala). Akukho mkhawulo wobudala noma wobuzwe.
8-Imisebenzi kufanele ilethwe icindezelwe kanye nefayela ledatha elisefayilini eliku-zip noma ifomethi ye-rar. Igama laleli fayela kuzoba yisihloko somsebenzi noma uma lide ngokweqile, isifinyezo salo.
9-Ama-imeyili athunyelwe awakwazi ukudlula ama-megabytes ayi-9 ngosayizi. Uma imisebenzi ithatha ngaphezu kwama-megabyte ayi-9, ifayili le-zip elenziwe lizohlukaniswa libe izingxenye eziningana, ngayinye ingaphansi kwamamegabhayithi ayi-9 ngosayizi. Uma le ndlela yokulethwa ingenzeki, bangaxhumana nososeshini bacele enye indlela yokulethwa.
Imiklomelo eyi-10: kukhona umklomelo owodwa we- € 150. Lapho umncintiswano wehlulekile, i-MYAKU Cultural Association izoxhumana nabaphumelele ukwazisa uhlobo lokulethwa.
11-Maqondana nemisebenzi ehlanganyelwe, umklomelo uzonikezwa omunye wababhali, oyisakhamuzi saseSpain futhi okhethwe ngaphambi kwesinqumo somncintiswano ngabo. Kuzoba yisibopho sababhali bemisebenzi ehlanganyelwe ukunquma ukuthi bangahlukanisa kanjani imiklomelo.
12-Isikhathi sokwamukelwa sizophela ngoMashi 31, 2009 phakathi kwamabili. Owinile uzomenyezelwa kubhulogi yenhlangano yamasiko nakwabanye abezindaba inhlangano leyo eyibona ibalulekile. ISIKHATHI SESIKHATHI SIKHATHI SESIKHATHI, ISIKHATHI SOKUPHELELA OKUSHA SOKUPHELELA SINGENZA 1
I-13-Ijaji lizokwakhiwa ngamalungu e-MYAKU Cultural Association, angahle acele izeluleko kochwepheshe kulo mkhakha ababona kufanelekile. Ijaji lingasho ukuthi umklomelo owodwa noma eminingi ayinalutho.
14-Amalungelo emisebenzi ethuliwe ayohlala engawababhali bayo.
15-Ababhali kungenzeka bangasebenzisi imisebenzi ethulwe noma banikeze amalungelo kubantu besithathu ngaphambi kukaMeyi 2010.
I-16-I-MYAKU Cultural Association inelungelo lokushicilela imisebenzi evezwe ngokwengxenye noma ngokugcwele kwimidiya yedijithali noma ephrintiwe.
Ukubamba iqhaza emncintiswaneni kusho ukwamukelwa kwalezi zisekelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Umncintiswano wesibili weMyaku
Iplanethi nomugqa weForamu
Uhlobo olusha lokuhlangana neComic ye-Avila